विविध भिडियो « Dhankuta Khabar
‘चार-पाँच लाखले हुँदैन करोड चाहिन्छ’ भन्दै इशाले आफ्नै पकेटबाट गरिन १ लाख सहयोग (भिडियो सहित)
युके, बिदेशमा बसे पनि नेपाल र नेपालीकै लागि आफुलाई समर्पित गर्ने केहि मध्येमा पर्छिन् इशा गुरुङ्ग । बेलायत बासि १ छोरीकी आमा समेत रहेकी इशा नेपालमा कोही कसैलाई आपत पर्यो
सन्दिप लामिछाने कलेज भर्ना हुँदा सँगै पढ्ने साथीबीच आफ्नो सेक्सनमा तानातान ! (भिडियो सहित)
काठमान्डौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित बनेका युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने कलेज भर्ना भएका छन् । उनले बौद्धस्थित जेभियर इन्टरनेसनल कलेजमा मंगलबार बिहान भर्ना फारम भरेका हुन्। स्टार क्रिकेटरका रूपमा
ज्योति मगर माथि होटल साहुको गिद्दे नजर !, मध्येराती जबर्जस्ती कोठामा छिरेर राखे यस्तो प्रस्ताव (भिडियो सहित)
इटहरी । चर्चित दोहोरि गायिका ज्योति मगर बेला बेलामा विभिन्न हर्कतका कारण चर्चामा आउने गरेकी छिन । हट अवतारमा स्टेजमा प्रस्तुति राख्ने ज्योति दर्शकलाई आफु केन्द्रित गराउदै स्टेज तथाउँ निकै
रबिना बादीको आरोप,- मेरो पैसामा पत्रकारले रक्सि र मासु खाएर मोजमस्ती गरे (भिडियो सहित)
काठमाडौं । रविना बादी जो केहि समयअगाडि मिडियामा निकै छाएकी थिइन् । श्रीमानसंगको उनको ब्यक्तिगत सम्बन्धका विषयमा बनाइएका समाचार र भिडियोका कारण उनी युट्युवमा निकै छाएकी थिइन् । केही समय
यस्तो हालतमा शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भए निर्मलाका बुबा – हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं । गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षया बालिका निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्तलाई काठमाडौंको टिचिङ्ग अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। छोरीको न्यायका लागि धर्नामा बस्दै गर्दा
निर्मला पन्तका बुवाको मानसिक सन्तुलन नै गुम्यो, यसरी पिट्दै र घुस खादै भन्सारमा सशस्त्र प्रहरी ! (भिडियो सहित)
यी दृश्यहरु हेर्नुहोस्, सामाजिक संजालबाट साभार गरिएका यी दृश्य आज राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रमको हो । जहाँ राष्ट्रपति कार्यालयलाई १८ करोडको गाडी किन्न भनि युवाहरुले भिख मागेका छन् । राष्ट्रपतिलाई
निर्मला पन्तका बुबाको बिग्रियो मानसिक सन्तुलन, बन्दुक खोस्ने प्रयास – हेर्नुहोस् दर्दनाक दृश्य
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका बुबा यज्ञराज पन्तले मानसिक सन्तुलन गुमाउनु परेको छ। महिनौँ देखि न्यायको भिख माग्दै आएका निर्मलाका बुबा र उनको परिवारको बिछिप्त हालत
शसस्त्र प्रहरीको यस्तो दानवीय रुपले वीरगञ्जमा आतंकनै छायो – हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं । देशका जनताको जिउज्याको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा अंग हो शसस्त्र प्रहरी बल । राज्यले यो संगठलाई भन्सारमा समेत सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि ।
अदालतबाट भन्दै बलात्कारी प्रोफेसरको वकिलको फोन पीडित किशोरीलाई !- ‘सहमतिबाटै सम्पर्क भएको’ भन्न दबाब ! (भिडियो सहित)
भनिन्छ विद्यालय मन्दिर हो । मन्दिर भनेपछि भगवान, पूजा, आरधना, सत्कर्म हुनुपर्छ । विद्यालय, कलेजहरुमा विद्यार्थीहरुलाई अझ विशेष गरेर छात्राहरुलाई गरिने व्यवहारप्रति सबैलाई संवेदनशिल हुन आज विशेष विशेष अनुरोध गर्न
मन्त्रीहरु जम्मा पारी प्रधानमन्त्रीले दिए निर्देशन,- आदेश दिनु पर्दैन, काम गरेर देखाउनुस् (भिडियो सहित)
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्य सम्पादनको गति बढाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्य सम्पादन गर्दा आदेश तामेलीको भर नपर्न पनि मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुलाई सचेत
शाही सेनाबाट वि’द्रोह गर्ने ल’डाकुलाई को’र्टमार्सलः पूर्व माओवादी नेताहरु भने मौन !
१८ मिनेट भित्रै पाँच गोल, म्यानचेस्टर सिटी ८–० ले विजयी
अब यसकारण सुन सस्तो हुने सम्भावना
चितवन मेडिकल कलेजले फिर्ता गर्नेभयो विद्यार्थीसँग असुलेको अतिरिक्त शुल्क
अनुष्का भारतका प्रभावशाली महिलाको सूचीमा सबैभन्दा कान्छी महिला
‘धनकुटाको शिक्षा क्षेत्रमा पुरै राजनीतिक ह’स्तक्षेप भयो’
धनकुटा कारागारमा रहेका कै’दीब’न्दीहरुको नि:शुल्क आँखा जाँच
चाडपर्व लक्षित गर्दै धनकुटाको चौविसेमा बाटो सफाई
विभिन्न पार्टी प’रित्याग गरी धनकुटाको पाख्रीवासमा ७० जना कांग्रेसमा प्रवेश
संविधान दिवसमा धनकुटाको पाख्रीबास ४ मा गरियो यस्ता काम…